2021-03-09Tuesday	कन्ट्रयाक टे«सिङ गरिएकाहरुको किन मागियो फेरी नामावली ? – खोजखबर – Hamro Nepal
कन्ट्रयाक टे«सिङ गरिएकाहरुको किन मागियो फेरी नामावली ? – खोजखबर
खोजखबर असार १७ ।
महादेवटारका ३३ जनाको रिर्पोट नआएपछि पुनः नामावली पठाइएको छ । समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको भीमसेन गाउँपालिका ८ बोर्लाङ्गको महादेवटारका ३८ जनाको कन्ट्रयाक टे«सिङ गरिएको थियो ।
प्रहरी हिरासतबाट छुटेका एक युवकमा कोरोना संक्रमण फेला परेपछि उनको सम्र्पकमा आएकोहरुको नमूना संकलन गरी पठाइएकोमा हालसम्म ३ जनाको मात्र रिर्पोट आएको छ । ‘मेसिन बिग्रियो भनेर खबर आयो रे गाउँपालिकाले पुनः नामावली पठाएको छ भन्ने सुनेको छु,’ वडा अध्यक्ष बासु थापाले भने, ‘यो त चमर लार्पवाही भयो । हामी त तनावमा छौं ।’
त्यहाँका स्थानीयले परीक्षण माथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । केन्द्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएका नमूनाको विश्वसनियता माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ‘यदी गडबड नभएको भए फेरी किन नाम मागियो ? यसरी आएको रिर्पोटको विश्वास कसरी गर्ने ?’ उनले भने,‘मैले फेरी जाँच गराउनु पर्ने माग गाउँपालिकामा राखेको छु । तर उहाँहरुले पर्देन भनेर टार्ने काम गर्नु भएको छ । जनता सबै आतंकित भएका छन् ।’
असार ८ गते नमूना संकलन गरिएकाहरुको रिर्पोट नआएपछि गाउँपालिकाले पुनः नामावली पठाएको पृष्टि भएको छ । तर मेसिन बिग्रिको भन्ने कुरा सत्य नरहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भेषराज खनालले दाबी गरे । ‘सँगै पठाइएका ३ जनाको रिर्पोट आयो, अरुको किन आएन भनेर हामीले बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रयोगशालाले पुनः एक पटक विवरण पठाइदिनु त हामिलाई रुजु गर्न सजिलो हुन्छ भन्यो । त्यसपछि हामीले उहाँहरुको विवरण मेल गरिदिएका हौं । अन्यथा होइन ।’
सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारीपन भीमसेन गाउँपालिका कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै गइरहेको छ । गोरखामा ८५ संक्रमित भेटिएको अबस्थामा ३५ जना त उक्त गाउँ पालिकामा फेला परेका छन् । मंगलबार मात्र भीमसेन ६ मोहोरियाका ८ वर्ष बालकमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ती मध्ये १० जना भन्दा बढि समुदाय स्तरका संक्रमित हुन् ।
उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ महादेवटार, ६ को मोहोरिया र ५ को रिठ्ठेपानी क्षेत्रलाई संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरि सिल गरिएको अबस्था छ । मंगलबार दोश्रो चरणको कन्ट्रयाक टे«सिङ गरिएको छ । प्रहरी हिरासतबाट छुटेका व्यक्तिको सम्र्पकमा आएका तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको सम्र्पकमा आएका हुनसक्ने ११७ जनाको कन्ट्रयाक टे«सिङ गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खनालले जानकारी दिए । अन्यको रिर्पोट नआउँदा कन्ट्रयाक टे«सिङको काम पनि थप अन्यौल बनेको छ ।
एक महिना सम्म रिर्पोट आएन
भीमसेन गाउँपालिको क्वारेन्टिनमा रहेका २ युवकको एक महिना सम्म पिसिआर रिर्पोट आएको छैन । असार भारतबाट आएर भीमसेन प्रावि अमलाभञ्जाङको क्वारेन्टिनमा बसेका र २२ गते देखि होम क्वारेन्टिनमा बसेका २ युवकको रिर्पोट प्राप्त नभएको वडा अध्यक्ष थापाले बताए ।
२९ गते स्वाब संकलन गरिएका उनीहरु दुबै जनाको रिर्पोट नआउँदा उनीहरु अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमै बस्न बाध्य भएका छन् । यता स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खनालले भने उनीहरु दुबैको रिर्पोट नेगटिभ आएको भन्दै बुधबार प्रक्रिया पुरा गरेर छोड्ने तयारी गरिएको दाबी गरे । ‘कन्ट्रयाक टे«सिङको क्रममा पोखराको प्रयोगशालाबाट डाक्टर साप आउनु भएको थियो । मैले यहाँको समस्या जानकारी गराएपछि उहाँले फोन गरेर बुझ्दा दुबै जनाको रिर्पोट नेगेटिभ रहेको बताउँनुभएको छ,’ खनालले भने, ‘प्राविधिक कारणले अड्किएको रहेछ बुधबार थप भेरिफाइ गरेर उहाँहरुलाई छोड्ने तयारी गरेका छौं ।’
abiJuly 1, 2020 News No Comments »
कोरोनासँग डर लाग्दैन – Online Khabar :Newer
Older: कुनै प्रकारका शुल्क नलिन विप्लब निकट विद्यार्थी संगठनको आग्रह – खोजखबर